Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Sidee loo daaweyn karaa Findoobka ama Finqooqa ka soo baxay Wajiga?
August 23 2017 10:46:17
Sidee loo daaweyn karaa Findoobka ama Finqooqa ka soo baxay Wajiga?
Findoobka ama Finqooqa sida dadka qaar u yaqaanaan waxa ay ka soo bixi karaan sanka kaliya ama wejiga oo idil, waxayna ka dhashaan qanjirro maqaarka ku dhex abuuran oo aad u yaryar oo soo saara dheecaan saliid ah oo maqaarka subkiya, qanjiradaas ayaa ka xirma afka kadibna bararaan markii la riixane waxaa ka soo baxa wax cad oo adag oo dadka qaar ay moodaan malax.
Inkastoo waxa toos u keeno finankaan aan la ogeyn laakiin waxaa jira waxyaabo dhowr ah oo dadajiya ama saacida soo bixitaankiisa oo ay ka mid tahay:
1- Daawooyinka qaar
2- Heerka hormoonnada qofka (hormoonnada jinsiga oo kacsan ee loo yaqaano "Androgens" ayaa lala xiriiriyaa soo bixidda finanka wajiga ee u badan dhalinyarada, xilliga qaangaarka ama waqtyada haweenka ay uurka leeyihiin, halkaas ayaana loogu magac daray).
3- Bakteeriyo (waxaa la sheegaa in ay jirto bakteeriyo badanaa lala xiriiriyo in ay ka qeyb qaadato samaysan haaraha wajiga markii finanka ay soo baxaan ka dib).
4- Qanjirrada finanka oo aad u shaqeeya (Haddii qanjirrada soo daayo dheecaanka subkiya maqaarka ay aad u shaqeeyaan, waxay keeni kartaa in saliidda ku xiranto sidaasne ay finan ku samaysmaan)
5- Diiqada (welwelka iyo fekerka) - Fakarka, stresska ama walwalka waxaa lala xiriiriyaa findoobka.
6- Cunnooyinka qaar waxaa la sheegay in ay xiriir la leeyihiin findoobka sida shokolaatada, caanaha, cunada leh karbohaydareetka, Vitamiinka A iyo E-ga.
ASne waa dhibaato ay ka sheegtaan in ka badan 85% dhalinyarada mana ahan cudur halis ah, dhibaatada ugu weyn uu keeni karane waa wajiga oo haaro yeesho, dhaawac nafsaani ah, niyad jab iyo ka go'idda bulshada (tanoo u badan xaga gabdhaha).
Findoobka waxaa loo isticmaalaa daawooyin badan oo ay ka mid tahay bamaatooyin la marsado laakiin waxaa kugu haboon in aad u tagto dhakhtar maqaar si loo arko finanka aad ka cabanayso nooca ay yihiin.
Maxaa yeelay waxaa jiro xanuuno maqaar oo dhowr ah oo u eg Findoobka oo lagu daaweeyo daawooyin ka duwan.
Iska ilaali in aad marsatid kareem ama daawo takhtar aan kuu qorin, waxaa dhici karto in ay wajiga kaa foolxumayso ama ku reebto haaro aan kaa fuqi doonin ama dhaawac maqaarka in aad is gaarsiisid.
Fadlan la xiriir takhtar haddii wajiga nabro ku leedahay si laguu daaweeyo.